मैनामैनी महोत्सव असफलताको भित्री कुरा | Makalukhabar.com
बेलका नगरपालिका वडा–७ ले आयोजना गरेको प्रथम मैनामैनी पर्यटन महोत्सव–२०७५ नराम्ररी असफल भयो । कुनै पनि योजना असफल र असफल हुनुमा आन्तरिक र वाह्य कारणहरुले भूमिका खेलेको हुन्छ । अझ कुशल योजनाकारहरुले कार्यक्रम असफल हुनुमा वाह्य कारणभन्दा आन्तरिक कारणलाई बढी जोड दिएको हुन्छ । कार्यक्रम असफल हुनुमा ८० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत वाह्य कारण हुने मान्यता छ । अर्थात, जुन कार्यक्रम असफल हुन्छ, उक्त कार्यक्रम असफल हुनुमा आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ । मैनामैनी महोत्सव ‘टाइटानिक जहाज’ हुनुमा आयोजक पक्षको आफ्नै ८० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक कारण थियो । जसको कारणले महोत्सव असफलमात्र होइन, महाअसफल भयो ।
महोत्सव असफल हुनुको मुख्य कडि कार्यक्रमको आकर्षण भनेर प्रचार गरिएको विवादास्पद धार्मिक गुरु भक्तकुमार राई (भकुरा) को उपस्थिति नै थियो । उदयपुर जिल्लाको तत्कालिन मैनामैनी गाविस–२ मा जन्मिएका भकुरा जो आफैले आफैलाई ‘स्वर्गीकदूत सत्गुरुॐ नन्द’ घोषणा गरेका थिए र नागरिकता पनि सोही अनुसार बनाएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा माओवादी जनयुद्धलाई असफल पार्न ‘गुरुको भूमिका’ दिएको तत्कालिन सरकारले सोहीअनुसार नागरिकता पनि बनाइदिएका थिए । हाल, भकुरा नेपालको नागरिकता त्यागेर क्यानाडाको नागरिक भएका छन् । उनै विवादास्पद नेपाली–क्यानेडियन नागरिकको सेरोफेरोमा कार्यक्रम घुम्ने भएपछि स्थानीय तथा सरोकारवालाहरुले हात झिकेका थिए । र, कार्यक्रम पूर्णरुपले असफल भयो ।
यो अवस्था सिर्जना हुनुमा नैतिकरुपले बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थापा जिम्मेवार देखिन्छन् । जसले आयोजक तथा सरोकारवालाहरुको चरम असहमतिकाबीच भकुरालाई अतिथि बनाउने पदीय ‘दादागिरी’ देखाए । यद्यपि, आयोजक वडा–७ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र राई आफै पनि भकुराको विपक्षमा थिए । आयोजक वडाको असहमतिकाबीच भकुरालाई अतिथि बनाउन राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरुसँग भकुराले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको तस्वीर देखाएर नगर प्रमुख थापाले आफ्नाे पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरे । कार्यक्रम असफलताको सुरुवात यहीँ पाटोबाट भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री त व्यक्ति हुन्, विवादमा तानिए पनि व्यक्तिगत मामला हुन जान्थ्यो । तर, किरात राई समुदायमा विभाजन ल्याउने गरी नगरप्रमुख थापाले जसरी षडयन्त्र गरे सो विषय निन्दनीय थियो । त्यसैले आयोजकको भित्री कुरा थाहा पाएपछि महोत्सवमा आउने भनेर पक्का भएर प्रचार गरिएका राजेश पायल राई, मेलिना राई, विल्सनविक्रम राईजस्ता कलाकारहरुले ‘कार्य व्यस्तताका कारण कार्यक्रममा आउन नसक्ने’ जानकारी दिए । कलाकारहरुको अनुपस्थिति नै भकुराको उपस्थितिलाई सभ्य ढङ्गले गरेको विरोध थियो । अझ, कलाकारहरुको अनुपस्थितिभन्दा पनि स्थानीयवासीले नै महोत्सवलाई अस्वीकार गर्दै कार्यक्रमममा उपस्थित भएनन् । स्थानीयवासीको अनुपस्थिति पनि नगरप्रमुख थापाले गरेको षड्यन्त्रविरुद्धको सभ्य विरोध थियो । न त कालो झण्डा, न त नारा–जुलुस, विरोधको कुनै स्वरबिना महोत्सव असफल भयो । जो, नगरप्रमुख थापाले गरेको षड्यन्त्रपछिको अपेक्षित परिणाम थियो । तर, यो कदम नगरप्रमुख थापाले पत्तै पाएनन् ।
महोत्सव असफलताको अर्काे पाटो भनेको महोत्सवले आफ्नाे उद्देश्य स्पष्ट पार्न नसक्नु नै हो । ‘मैनामैनी पर्यटन महोत्सव’ भनेर पर्यटनलाई जोड दिएको यो महोत्सव पूर्णरुपले धार्मिक महोत्सवजस्तो देखिएको थियो । पर्यटन महोत्सव भनिएको स्थलमा धार्मिक पर्यटनको झल्को दिने गरी भकुराले प्रतिपादन गरेको धर्मको झण्डा वा प्रचार सामग्री राखिनु अत्यन्त दुखद विषय थियो । बेलका नगरपालिका आफै आयोजक भएकोले यो विषयसँग आयोजक जानकार थिएनन् भन्नु हास्यास्पद विषय हुन जान्छ । नगरपालिका र वडा समितिको बजेटबाट आयोजना भएको ‘पर्यटन महोत्सव’ लाई भकुराद्वारा प्रतिपादित धर्मको ‘धार्मिक महोत्सव’ को झल्को आउने बनाउन दिनु नियोजित थियो । पर्यटन महोत्सवलाई ओझेलमा पर्दै भकुराको आयोजनामा भएको धार्मिक महोत्सव बनिरहेको सन्दर्भसँग आयोजक बेलका नगरपालिकाका नगरप्रमुख बेखबर थिए भन्नु मुर्खता हुन जान्छ । किनकि, नगरप्रमुख आफै झापामा गएर अतिथिकोलागि भकुरालाई निम्तो दिएर आएका थिए । कार्यक्रमको असफलतापछि यसको दोष वडा–७ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र राईलाई थोपरेर पानीमाथिको ओभानो हुन नगरप्रमुख थापाले आफ्नाे पदीय दादागिरी अब कसरी देखाउँछन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
कार्यक्रम उद्घाटनकै दिन भकुराले सम्बोधन गरिरहेको बेला पूर्व वडाध्यक्ष दुर्गा राईले कार्यक्रम स्थलमै भकुराको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरेका थिए । विभिन्न तिलस्मी कथा बुनेर स्वघोषित ‘भगवानका दूत’ बनेका भकुराको बारेमा उनकै छिमेकी दुर्गा राईलाई थाहा नहुने कुरै थिएन । मञ्चमै भकुराको विरोध भएको दृश्य देखेका नगरप्रमुख थापाले कार्यक्रमको पछिल्लो दिन नै स्थानीयवासीसँग माफि मागेको भए कार्यक्रमले गति लिने थियो । तर, नगरप्रमुख थापाको षडयन्त्र अर्कै भएकोले स्थानीयवासीसँग माफि माग्न चाहेनन् । फलस्वरुप, नगरप्रमुख थापा आफै आफ्नाे षडयन्त्रमा असफल भए नै आफ्नै वडाले घोषणा गरेको मैनामैनी पर्यटन महोत्सव पनि असफल गराए ।
पुष १–७ गतेसम्म भनिएको सो महोत्सवमा ल्याइएको रोटे पिङ पुष २० गतेसम्म उठाउन नसक्नुले कार्यक्रम कति फितलो भयो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एटिएम फुटाएर चोरी गर्न खोज्ने पक्राउ, भवनबाट खसेर मृत्यु एककाे मृत्यु
दोलखामा स्काभेटर दुर्घटना हुँदा १ को मृत्यु, ३ जना घाइते
पानीले पानीमा पानी लेखिदैन
संकेत कोइराला, भगवान श्रीरामको राज्याभिषेक समारोह भइरहेको थियो । रामले कौशल्यासंग भने– ‘आमा ! म राजा भएँ । मैले आफु भन्दा सानालाई केही दिनुपर्छ । तपाईं सवैलाई बोलाएर केही न केही माग्न भनिदिनुस् ।’ भरतलाई बोलाइयो । ‘तपाईंको पाउमा मेरो दिनप्रतिदिन प्रेम बढ्दै जाओस्’ भन्दै लिन इन्कार गरिदिए । भरतपत्नी... जारी राख्नुहोस...
‘मन्त्रीहरु असफल तपाईं सफल कुन शास्त्रको मानक हो ?
सुकरात आफ्ना चेलाहरुसँग बसेर कुरा गरिरहेका थिए । यही समयमा आफूलाई ज्योतिष बताउने एउटा मानिस प्रवेश गर्दै भन्छ– ‘म अनुहार हेरेर उसको विगत, वर्तमान र भविष्य बताउन सक्छु ।’ ज्योतिषले सुकरातका बारेमा फटाफट भन्न थाल्यो– ‘नाकका प्वालको आकार हेर्दा थाहा हुन्छ तपाईं रिसाहा हुनुहुन्छ । टाउकोको आकारले भन्छ–अत... जारी राख्नुहोस...
श्रीमानको विरासत धान्ने श्रीमतिहरु, जो पहिले गुमनाम थिए
मंसिर १६, काठमाडौँ । शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनको अधिकांश स्थानको मत परिणाम पनि घोषणा भइसकेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरुको विभिन्न दुर्घटनामा अल्पायुमै निधन भएपछि रिक्त रहेको पद पूर्तिका लागि उपनिर्वाचन भएको हो । यस पटकको उपनिर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा श्रीमानको निधन भएपछि श्रीमतिलाई उम्... जारी राख्नुहोस...
धरानका सुकुम्बासीको प्रश्न: ‘हाम्रो लालपुर्जा खै ?’
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका सुगम क्षेत्र भएपनि यहाँ भूमिहिन अर्थात सुकुम्बासीहरुको ठूलो जमात छ । ०४५ सालको भुकम्प पश्चात धरानका सर्दु सेउती खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहिनहरुले लालपुर्जा पाउनकै लागि पटक–पटक स्थानीय र केन्द्रिय सरकारसँग माग गरे । तर, जति पटक सुकुम्बासीको भोट पाएर सत्तामा गए... जारी राख्नुहोस...
पढाइ, कमाइ, दवाइ र विदाइ
‘यो तीन सहर भन्याकोचिस्व ढुंगो रहेछ . षेलषाल मात्रै ठुलो रहेछ . कुपको पानी षान्याछेउ बुधि पनि हुदैन. सुरो पनि हुदैन. षेलषाल मात्र रहेछ. मेरो मनसुबा त दहचोकमा दरबार बनाउला र चारै दिसा थरघरको गुरु प्रोहित भैयाद भारादार मिर उमराउको घर बनाई छुट्टा दरबार बनाउला र ई तिन सहरमा ता दरबारबाट स्वषसयललाई मात्रै... जारी राख्नुहोस...
समस्या जहाँ बढी छ, समाधान पनि त्यहीँ गएर खोजौं
लैंगिक हिंसा बिरूद्धको १६ दिने अभियान आज देखि आरम्भ हुँदैछ । १६ दिने अभियान आ–आफ्नै सोंच, विचार र शैलीमा बिभिन्न संघसंस्था, संगठन, व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूले मनाउने छन् । यस अवसरमा मलाई पनि आफ्ना केही विचारहरू पाठकहरूसमक्ष पस्कन मन लाग्यो ।यस अभियानबाट पितृसत्तावादी र महिलावादी सोंचमा के परिवर्तन आउँछ... जारी राख्नुहोस...
हाम्रो एक भोट कतै भ्रष्टाचारको लाइसेन्स त बन्दै छैन ? भोलि धारे हात लाएर नेतालाई सराप्नुभन्दा आजै सचेत बनौं
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भइ नै सकेको छ । निर्वाचनपछि जे जस्ता परिदृश्यहरू देखिए, त्यसको समीक्षा जरूरी छ । मंसिर १४ गते हुन गइरहेको उप-निर्वाचनको जिम्मा दल र नेताहरूलाई मात्र सुम्पिएर हामी मतदाता कानमा तेल हालेर बस्ने अबस्था छैन ।कुनै एकजना नेतालाई जि... जारी राख्नुहोस...
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा देखिएका अस्पष्टता, के अब सरकारले गति लेला ?
मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने भन्ने हल्ला चलेको करिब ५ महिनापछि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । बिहानैदेखिको लामो कसरतपछि बेलुकी पखमात्रै सहमति भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । करिब ५ महिनाभन्दा अघिदेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने... जारी राख्नुहोस...
टुटल र पठाओ हैन सरकार ! चर्को भाडा असुल्ने ट्याक्सी चालकका लाइसेन्स खारेज गरिदेऊ
साँढे आठै बजे खाना खाएर सार्वजनिक बस चढेर कार्यालय आउनु पर्ने केहि दिन देखिको मेरो बाध्यता थियो । आफुसँग भएको सवारी बेचेर अर्को लिने चक्करमा मैले असोज अन्तिम सातादेखि सार्वजनिक यातायात, बस ट्याक्सी, टेम्पो त कुनै बेला टुटल र पठाओका सेवा प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । १० वर्ष भएको थियो मोटरसाइकल चलाउन थाल... जारी राख्नुहोस...
हुम्लामा हिमपात, हवाई सेवा अवरुद्ध, जनजीवन प्रभावित
नेपाली युवा प्रकाशमणी भारतमा सम्मानित
टी-२०: भारतसँगको अन्तिम खेलमा वेस्टइण्डिज ६७ रनले पराजित
नेपाली बालनाटक ‘करेसा कन्सर्ट’ ‘कोलकता अन्तर्राष्ट्रिय बालनाटक महोत्सव’मा मञ्चन
पप्पुलाई हटाएपछि ‘तराई–मधेशको लाइफ लाइन’ पुल निर्माणमा तीव्रता
मध्यरातमा स्काभेटर दुर्घटना, एकको मृत्यु, तीन घाइते
‘पूर्ण खोप अभियान’ अत्यन्तै ठूलो र चुनौतीपूर्ण छः सामाजिक मन्त्री घिमिरे